छिमेकी देश भारतमा बढ्दै ओमिक्रोन संक्रमित, समुदायस्तरमै संक्रमणको बढ्यो खतरा – Health Post Nepal
छिमेकी देश भारतमा बढ्दै ओमिक्रोन संक्रमित, समुदायस्तरमै संक्रमणको बढ्यो खतरा
२०७८ पुष ११ गते १२:२९
काठमाडौं – भारतमा कोभिड-१९ को नयाँ संस्करण ओमिक्रोनको संक्रमण दिनानुदिन बढिरहेको छ। भारतमा हालसम्म ४२२ जना ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएका छन्।
महाराष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै ओमिक्रोन केसहरू छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनवरी १० देखि अग्रपंक्तिमा काम गर्ने र ६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई खोपको बुस्टर डोज दिने घोषणा गरेका छन्। महाराष्ट्रमा ओमिक्रोनका सबैभन्दा बढी १०८ केसहरू छन्। यसपछि दिल्लीमा ७९ र गुजरातमा ४३ जना संक्रमित भएका छन्।
ओमिक्रोनबाट संक्रमित १८३ केसमा केन्द्र सरकारले गरेको विश्लेषणले देखाएको छ कि, १० मध्ये कम्तिमा ९ जनाले खोपको दुबै डोज पाएका थिए। शुक्रबार यस विश्लेषणको तथ्यांक साझा गर्दै केन्द्रले महामारीबाट बच्न खोप पर्याप्त नभएको बताएको थियो। केन्द्रले भ्याक्सिन लगाएपछि पनि मास्क र निगरानी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रसारण चेन तोड्न सकिने बताएको छ।
यो विश्लेषण केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषणद्वारा जारी गरिएको थियो। यस विश्लेषणले सङ्क्रमितमध्ये २७ प्रतिशत विदेश भ्रमण नगरेका व्यक्तिहरू रहेको देखाउँछ। यसले समुदायमा ओमिक्रोनको उपस्थिति रहेको संकेत पनि गर्छ।
कोभिड टास्क फोर्सका प्रमुख डा. वीके पलले चेतावनी दिएका छन् कि, ओमिक्रोन डेल्टाभन्दा बढी संक्रामक छ। डा. पलले मास्क नलगाई बाहिर निस्केको एकजनाका कारण सम्पूर्ण परिवार नै संक्रमित हुनसक्ने बताए।